Villa Meli Afionas Corfu - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguKonstantinos
IVilla Meli ikwilali yaseAfionas kwicala elingasentshona laseCorfu. I-villa ixhotyiswe ngokupheleleyo ngazo zonke izinto eziluncedo. Yindlu entle, esandula ukulungiswa ekwaziyo ukuhlalisa abantu aba-5 kwindawo ye-85 square metres (amagumbi okulala amabini, elinye linebhedi ezimbini, elinye lineebhedi ezimbini zomntu omnye kunye nebhedi yesofa kwigumbi lokuhlala) . yangasese kwabiwe yokuvasa, ikhitshi eliphangaleleyo, indawo okudlela kunye igumbi ophilayo
.Ngenxa yendawo emangalisayo, iindwendwe zinokonwabela umbono omangalisayo woLwandle lwe-Ionian ukusuka ebhalkoni.
I-Afionas yenye yezona dolophana zindala eCorfu, ezakhiwe kwindawo entle, kwindawo enentaba enika iimbono ezintle zolwandle oluvulekileyo, isiqithi esinamatye saseGravia, iziqithi zaseDiapontia, kunye nokutshona kwelanga okukhethekileyo. Ngasekunene kwe-Afionas, unokumangaliswa kwi-bay ye-Arillas kwaye ngakwesobunxele, i-bay ye-Agios Georgios kunye nolwandle olumangalisayo.
I-Afionas yilali entle kakhulu enezindlu ezimibalabala kunye nezitrato zamatye acoliweyo. Icawa esembindini wale lali yiAgios Ioannis, eyakhiwa ngowe-1636. Ecaleni kwecawa, kukho ilitye lesikhumbuzo elinikezelwe kuHector Yalopsou, igosa lomkhosi waselwandle elabulawa eImia ngowe-1996 laza lavela apha.
Ngezantsi kwe-Afionas, lunxweme oludumileyo lwePorto Timoni. Ngokusisiseko ngamanxweme amabini, ahlulwe omnye komnye ngumcu omxinwa womhlaba. Ulwandle olusekhohlo lubizwa ngokuba yiLimni kwaye lunamanzi aluhlaza, ngelixa ngasekunene yiPorto Timoni enamanzi aluhlaza amnyama. Uya kufika kubo emva kokuhamba intaba malunga nemizuzu engama-20.
Ungaphinda uhambe uhambo e-Afionas, kwaye undwendwele iCorfu Microbrewery e-Arillas. Ungazama ukuntywila eAgios Georgio sPagon beach.
Umbuki zindwendwe ngu- Konstantinos
Inombolo yomthetho: 00000062512
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Afionas